Cuntooyinka Vitamin E-ga Leh Waxay Ka Hortaagaan Kansarka, Cudurrada wadnaha & Indhaha - Daryeel Magazine
Cuntooyinka Vitamin E-ga Leh Waxay Ka Hortaagaan Kansarka, Cudurrada wadnaha & Indhaha
Cunista cuntooyinka ay ku badan yihiin Vitamin E, gaar ahaan marka afka laga qaato, waxay si fudud uga hortagaan kansarka ku dhaca beerka, cudurada kale e asiiba wadnaha iyo indhaha sida lagu sheegay daraasad ay soo saareen khubaro u dhalatay dalka Shiinaha.
Cilmi-baadhistan daaha ka qaaday in qaadashada cuntooyinkay ku Faytamin E-gu sida lawska, digirta iyo khudaarta hoos-u-dhigaan khatar dadka da’da dhexe iyo kuwa waaweyn ugu jiraan kansarka beerka ku dhaca, sidoo kalena lagu iftiimiyey inay ka hortagto wadne xannuunka iyo dhaawacyada soo gaadha indhaha ee dhinaca araga.
Dr. Wei Zhango oo ka tirsan mac-hadka Shangai Cancer Institute ee dalka Shiinaha, daraasadana qaybta ugu weyn ku lahaa ayaa dadka ay baadhitaanka ku sameeyeen ahaayeen 132, 837 qof oo ay ku jiraan 267 qof oo uu hayey cudurka kansarka beerta, iyadoo dalka Shiinaha Kansarka beerka ee adduunka saameyey uu isaga ka jiro 54% ka mid ah qiimaynta lagu sameeyey waddamada kansarku asiibay.
“Waxaannu helnay arrin iska cad oo ku saabsan xidhiidhka daawo ee ka dhaxeeya Kansarka iyo qaadashada Vitamin E-ga.
Farriintayaduna waa in guriga lagu isticmaalo cuntooyinka ka kooban Faytamiin E-ga si dadka waaweyn iyo da’da dhexeba looga ilaaliyo kansarka beerka ku dhaca, wadno xannuunka iyo indho la’aantaba,” ayuu yidhi Dr. Wei.
Kansarka beerka ku dhaca waa cudurka saddexaad ee sababa dhimashada kansarka dunida, waxaana ugu dhawaad waddamada hormuray kansarku ku dhaca 85%.
Daraasadan waxa lagu daabacay wargeyska la yidhaa The National Cancer Institute ee ka soo baxa dalka Shiinaha oo ka faalooda cudurka kansarka daawooyinkiisa iyo macluumaadada ku saabsan.
Cunista Shukulaatada Madow Waxay Kaa Difaaci Kartaa Macaanka Iyo Cudurrada Wadnaha DARAASAD: Badsashada Cabitakaanka Biyuhu Waxa Ay Hoos U Dhigaan Cudurrada Wadnaha Ku Dhaca Cuntooyinka Laga Qaado Kansarka